Taariikh Nololeedkii Hooyadii Fanka Soomaaliyeed Guduudo-CARWO DAAWASHO-WACAN | HAYAAN NEWS
Taariikh Nololeedkii Hooyadii Fanka Soomaaliyeed Guduudo-CARWO DAAWASHO-WACAN
Hargaysa(Aftahannews)- Shamis Abuukar ayaa ku dhalatay deegaan xeebeedka Conqor oo dhanka bari kaga beegan Magaalada Berbera sanadkii 1935, Waxanay kusoo kortay Magaalada Berbera sanadihii hore nolosheeda waxaanay Fanka ku soo biirtay taariikhdu markey aheyd 1952kii oo markii ugu horeysay codkeeda laga maqlay Radio Hargeysa.
Guduudo Carwo ayaa ahayd gabadhii ugu horeysay ee af soomaali ku heesta qiyaastii 1950-aadkii, wakhtigaasi oo soomaalidda dhexdeedda fanku ceeb ku ahaa, waxaanay noqotay hooyadda hablaha fanaaniinta ah.
Inkastoo muddo dheer iskaga hadhay Fanka,isla markaana xanuun u jiiftay labaatankii sannadood ee la soo dhaafay, waxaanay joojisay guud ahaan fanka, iyadoo aad u necbaatay heesaheeda in la dhagaysto iyo in xaga fanka laga waraysto, waxaanay mar walba odhan jiray waxay ahayd casri jaahilidii,isla markaana ku dooday in haddii ay sida hadda diinta u baratay u taqaano aanay fanka gasheen.
Guduudo Carwo waxaa ay dad badan oo Soomaali ah ku xusuustaan heesihii ay qaadi jirtay iyo kaalintii ay ku laheyd in fanka Soomaalidu dhinaca dumarka ka dhismo, waxa lagu xasuusta heeso iyada loo qaaday oo la odhan jiray Guduudo Carwooy gu’gii la arkaba yaa gashaati ka dhiga, waxa kale oo iyana jirta maahmaah magacyadeeda lagu soo dari jiray, waxaanay ahayd shakhsi xaga fanka looga dambeeyo.
Shamis Abokor Ismaaciil “Gudoodo Carwo” waxaa ay dhimatay iyadoo 82 jir ah, waxaanay mudooyinkii u dambeeyey ku nooleed magaalada Hargeysa.